» बम पड्काउछु भन्न्नेलाइ त्यही रंगशालामा खरानी पार्छु , बैशाखिले ठोक्छु ! को हुन यी व्यक्ती?( हेर्नुहोस भिडियो) बम पड्काउछु भन्न्नेलाइ त्यही रंगशालामा खरानी पार्छु , बैशाखिले ठोक्छु ! को हुन यी व्यक्ती?( हेर्नुहोस भिडियो) – हाम्रो खबर
बम पड्काउछु भन्न्नेलाइ त्यही रंगशालामा खरानी पार्छु , बैशाखिले ठोक्छु ! को हुन यी व्यक्ती?( हेर्नुहोस भिडियो)
2021, April 7th, Wednesday
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यामा छ । अहिले चियावालीको उपनामले सामाजिक संजालमा निकै नै भाइरल बनेकी नुवाकोटकी सृष्टि तामाङ जो आफ्नो दुई वर्षको आफ्नो दुधे बालकलाई आफ्नो पिठ्युँमा बोकेर रातको तीन बजेदेखि चिया बनाउँदै र बेच्दै आउनुभएको छ। उहाँको संघर्षको यो दृश्यलाई गोदावरीका एकजना फोटो पत्रकार गजेन्द्र राज नेम्बाङले सामाजिक संजालमार्फत सेयर गर्नुभयो र यो दृश्य यतिबेला संसारभर भाइरल बन्न पुग्यो।
उहाँ बिहान तीन बजेदेखि नै आफ्नो बच्चा पिठ्युँमा बोकी चिया बेच्नुहुँदो रहेछ। उहाँको माइतीघरतिर दिदीबहिनीहरू भएतापनी घरपटी चाहिँ खासै कोहि हुनुहुन्न रहेछ। उहाँको श्रीमान चाहिँ अहिले सुनधारामा सानोतिनो ठेक्कापट्टा गर्नुहुँदो रहेछ।